Narkọs: Agha Cartel & Atụmatụ aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Narkọs: Agha Cartel & Atụmatụ aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Bibie ndị iro gị wee bụrụ Capo dị ike – Onye ndu nke cartel nke gi na egwuregwu gọọmentị nke NARCOS! Họrọ atụmatụ agha gị wee bụrụ nna nna nke alaeze gị.
Banye n'ime dị ize ndụ ma na-akpali akpali Ọrụ nke cartel kingpin na egwuregwu ụlọ ọrụ gọọmentị nke ihe ngosi telivishọn kụrụ NARCOS. Kpebie n'etiti iduga site na ike raw ma ọ bụ ikpokọta nkwanye ùgwù site na iguzosi ike n'ihe. Mgbe ụfọdụ ndị ajọ mmadụ na-eme ihe ọma… N'ikpeazụ ị ga-ekpebi, ọ ga-abụ "Plata o Plomo"?
Mụta ụdọ nke ịgba ọsọ n'aka onye nwe ọgwụ El Patron n'onwe ya wee jikwaa “mmekọrịta” gị na ndị ọchịchị site na ndị nnọchi anya Murphy na Pena na-eme ka ọ bụrụ otu egwuregwu FBI kacha atọ ụtọ.. Banye ụwa nke Narcos nwere mmemme na-akpali akpali yana mmelite nke ọdịnaya sitere na ihe ngosi ahụ.
Were ma wuo ya
Họrọ Plata ma were sicarios wee wuo ihe nchekwa gị. Chịkọta sicarios dị iche iche, bulie ha elu ma mee ka ha chebe ndị isi ọgwụ cocaine ma tinye ego na mmepụta.
Họrọ Plomo wee ziga ndị otu ọnwụ sicario ka ha weghara akụrụngwa bara uru n'aka ndị egwuregwu ndị ọzọ.
Zụlite ọrụ gị site na iji osisi nhazi na ụlọ nyocha mepụta finca ọhịa gị. Họrọ ahịrị smuggling na atụmatụ iji bulie ego ha ga enweta.
Soro ndị egwuregwu ndị ọzọ jikọọ ọnụ ka ha mepụta cartels, nọchibidoro ogige ndị iro ndị iro na mkpọsa ọtụtụ ụbọchị maka ịchịisi.
Enwere ego na ike a ga-eme. Site ugbu a gaba, o nweghi ebe nchekwa.
Narcos bụ ihe nleba anya n'ime ndị ikom na-akwụsị n'enweghị ihe ọ bụla iji weda ndị isi ọgwụ cocaine. Site na gọọmentị Colombia nye ndị ọrụ DEA, site n'aka ndị uwe ojii ga-etinye ndụ ha n'ihe ize ndụ nye ndị ọrụ US ga-atụgharị akụkọ ahụ. Narcos bụ nlele na-enweghị atụ na agha nke ga-agbanwe agha ọgwụ ike ruo mgbe ebighị ebi.
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Cartel, CheatsHack, Narkọs, Atụmatụ, Wars
← Ndị dike Bit: 8-Ndị aghụghọ Pixel Quest&Mbanye anataghị ikike Ihunanya HOLIC – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →
Slash & Nyefee: Live Guild Raids Cheats&Mbanye anataghị ikike
Dungeon and Puzzles – Sokoban Cheats&Mbanye anataghị ikike
Fantastic Beasts’ Legend – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
We Are Illuminati: Conspiracy – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Garbage Pail Kids : Egwuregwu Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Real Boxing 2 – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike